Fifampifanarahana Sagittarius sy Sagittarius: Fitiavana, firaisana ara-nofo ary fisakaizana - Famantarana Zodiac
Fifampifanarahana Sagittarius sy Sagittarius: Fitiavana, firaisana ara-nofo ary fisakaizana
Ny fitiavam-piainana, ny fanaovana risika ary ny filalaovana mafy dia ao ambadiky ny fifanarahan'i Sagittarius sy Sagittarius! Ity mpivady tantaram-pitiavana ity dia misy itovizany, tsy misy isalasalana fa ny firaisan'izy ireo dia voasoratra ao amin'ny kintana! Ny fitiavana fitsangatsanganana dia zavatra zarain'izy ireo ary fanandramana vaovao no tadiavin'izy ireo. Ity duo ity dia manakaiky ny fiainana amin'ny fomba fijery tanora. Te hianatra sy handray betsaka araka izay azony atao izy ireo mandritra ny fotoana ankafiziny!
Ny mpivady Sagittarius sy Sagittarius dia tia zavatra amin'ny lafiny liar. Tsy midika anefa izany fa tsy be fanirian-daza izy ireo. Raha ny tena izy, ny toetra roa Sagittarius dia mpiasa manolo-tena amin'ny fametrahana fiainana milamina ho an'ny tenany. Ankoatr'izay, fantatr'izy ireo fa mila vola izy ireo hiarahan'izy ireo mandrehitra ny zava-niainany mahafinaritra rehetra. Miasa mafy sy milalao mafy no anaran'ny lalao Sagittarius!
Raha samy mieritreritra ny hanana fianakaviana manan-janaka ny roa tonta amin'ity tantaram-pitiavana ity dia amin'ny andro farany io. Ny mpivady tanora Sagittarius dia mitady hanana fahafinaretana be nefa tsy misy tadim-pianakaviana mifamatotra. Samy hanana lisitry ny siny iray kilaometatra izy ireo. Rehefa lasa mpivady izy ireo dia tsy maintsy mifandimby mitady izay notch amin'ny fehikibo tadiavin'izy ireo manaraka. Herinandro dia fitsangatsanganana mankany Timbuktu. Ny fialan-tsasatra manaraka, manomana fitsangatsanganana any Amazon izy ireo!
Sagittarius sy Sagittarius Lisitry ny atiny
Fifanarahana Sagittarius sy Sagittarius
Sagittarius sy Fitiavana Sagittarius
Firaisana ara-nofo Sagittarius sy Sagittarius
Fampifanarahana an'ny lehilahy Sagittarius sy ny vehivavy Sagittarius
Vehivavy Sagittarius sy mifanentana amin'ny lehilahy Sagittarius
Sagittarius sy Sagittarius Love Match Wrap-Up
Ny lalao fitiavana Sagittarius sy Sagittarius dia manana marika mifanentana avo. Ny mpivady dia manomboka amin'ny namana izay manana fahalianana mitovy hevitra aminy. Tsy mahagaga raha mivady ireto mpivady ireto rehefa manao ski, na mitsambikina Bungie, na misitrika lanitra. Raha tsy izany dia nifankahita izy ireo raha nitety an'izao tontolo izao. Izy ireo dia mpivady mandeha mandehandeha izay tia mameno isa-minitra amin'ny zavatra mahafinaritra ho hita sy hatao!
Ny mpivady Sagittarius sasany dia mivory ao amin'ny sehatry ny asa ary mety manao tetikasa mpandraharaha ho azy ireo manokana. Faly izy ireo mandray ny risika rehetra amin'ny tolotra orinasa. Ankoatr'izay, ny olom-banona Sagittarius dia manizingizina ny diabe ho an'ny gadon-dry zareo. Tsy hisy ny gadona hafa. Maka ny fiainana araka ny hafainganan'izy ireo izy ireo. Ny ankamaroan'ny hafa dia manana fotoana tsy mety manandrana manaraka azy ireo.
Izany no mahatonga ny mpivady Sagittarius sy Sagittarius hanao lalao tena tsara amin'ny fitiavana. Izy ireo dia afaka miatrika ny hetsika haingam-pandeha takian'ny antoko tsirairay. Raha ny marina dia irian'izy ireo izany. Samy hiroboka ao anaty ny traikefa nahafinaritra izy roa avy eo tsy misy fisalasalana. Mahafantatra ny fiara sy ny antony mahatonga azy ireo izy ireo. Tsy misy fanontaniana apetraka amin'ny raharaha Sagittarius sy Sagittarius. Mifankahalala toa ny ahalalany ny tenany izy ireo.
Ny fiheverana feno fanantenana momba ny Sagittarius roa dia manintona mahery. Mitovy ny fomba fijerin'izy ireo ny fiainana ary mitovy ny fari-piainany. Ity duo ity aza manana drafitra fiainana mifanentana raha toa ka amin'ny fotoana tokony hankafizanao ny fiainana sy amin'ny fotoana ilana fianakaviana. Mandritra ny fahatanorany dia mety hisy fotoana izay ananan'ny ankolafy roa misokatra amin'ny fiarahana amin'ny olon-kafa. Matetika, ity no dingana voalohany amin'ny fifandraisana alohan'ny fisian'ny fikorontanan'ny fihetseham-po. Raha vao manolo-tena dia manamafy ny roa tonta fa ilaina ny tsy fivadihana.
Ny fifandraisana Sagittarius sy Sagittarius dia iray izay manatanteraka ny roa tonta amin'ny ambaratonga tsirairay. Izy ireo dia manome fahafaham-po ny filan'ny fihetseham-po amin'ny hafa satria malalaka amin'ny hafa. Na dia miafina amin'ny sisa amin'izao tontolo izao aza izy ireo, rehefa mamorona fifamatorana izy ireo, dia mizara ny tsiambaratelony amin'ny olon-tiany i Sagittarius. Mizara fahaiza-misaina mitovy amin'izany izy ireo izay no mampanakaiky azy ireo voalohany. Ny fahatsapana fa manana filàna sy zavatra ilaina izy ireo dia vao mainka manamafy ny fifamatoran'izy ireo.
Ny fahamarinana dia andry iray amin'ny fifankatiavana Sagittarius sy Sagittarius. Satria samy manao ny marina ny andaniny sy ny ankilany dia manampy amin'ny fahatokisana lalina ananan'izy ireo izany. Fantatr'izy ireo fa afaka mifampiankina amin'ny fotoan-tsarotra izy ireo. Ny olom-banona Sagittarius dia maneho ny fifankatiavany amin'ny teny sy fomba fiteny. Hifampiresaka izy ireo. Na dia tsy dia mirona amin'ny fampisehoana fitiavana ara-batana aza izy ireo, dia zara raha afaka mifampikasoka amin'ny tanany samirery!
Miaraka amin'ny toetra roa Sagittarius, mandroso miadana ny fifandraisana. Na dia mifankatia aza izy ireo, dia miambina hatrany. Raha ny andaniny roa no nodorana tamin'ny fifandraisana teo aloha dia vao maika hihamalefaka kokoa ny fifamatorana. Mahaleo tena ihany ny roa tonta, ka tsy maninona izy ireo raha mandany fotoana amin'ny fanoloran-tena. Rehefa mandeha ny fotoana, rehefa mitombo ny fifampitokisana, ity mpivady ity dia mahita ny fahaizany mifanaraka. Mahatsapa izy ireo fa toa nahita an'io sombin-tsarimihetsika tsy hita tadiavin'izy ireo nandritra ny androm-piainany io.
Ny raharaham-pitiavana Sagittarius sy Sagittarius dia lalina sy misy dikany. Ny andaniny sy ny ankilany dia mitady hanararaotra ny androm-piainany, misaraka ary miaraka. Ny firaisan'izy ireo dia miteraka lesona amin'ny fitiavana ny tena sy ny fanekena ny tenany. Rehefa mandeha tsara ity pairing romantika ity dia nofehezin'izy ireo ny lesona azony.
Ny singa afo dia manan-kery amin'ny toetra Sagittarius. Izy io dia manazava ny fandehan'izy ireo sy ny fitiavany loza. Izy io koa dia manazava ny fihenjanana ara-nofo mihetsiketsika sy mahery vaika ananan'ny olon-droa Sagittarius! 'Atsangano ny kink factor folo hafa, azafady!' Izany no tenin'ny sagittarius tsy fantatra!
Ny olon-tiana Sagittarius sy Sagittarius dia mahita ny firaisana ara-nofo mampientam-po toy ny adrenaline hafa izay manomboka tranga. Ity mpivady ity dia mania tsy ho mahazatra ao amin'ny efitrano fandriana. Vahao ny akanjo anatiny sy ny boaty kilalao miafina. Misy fahafinaretana izay hananana. Roleplaying koa dia ao amin'ny playlist alohan'ny hatoriany.
Sagittarius dia olona iray, rehefa manao zavatra, dia mivoaka daholo. Tsy misy mailaka maharitra dimy minitra miaraka amin'ity mpivady ity. Rehefa tonga ny fotoana hamelezana ireo takelaka, dia mandritra ny alina i Sagittarius sy i Sagittarius. Haharitra ora maromaro vao hifarana ny fotoana filalaovan'izy ireo! Ireo antoko amin'ny lalao fitiavana Sagittarius sy Sagittarius dia tsy manana olana amin'ny fanatanterahana ny nofinofisin'izy ireo koa. Tsy misy zava-miafina eo amin'ny mpitia Sagittarius roa, indrindra ao ambadiky ny varavarana mihidy ao amin'ny efitrano malalany.
Ny fanandramana dia eo ambony latabatra miaraka amin'ity duo ity; hanandrana na inona na inona indray mandeha izy ireo. Raha toa ny olon-droa Sagittarian mpivady toy ny manao hetsika manokana eo am-pandriana, dia lasa ampahany maharitra amin'ny repertoire fanaovana firaisana izany. Raha vantany vao lasa efitra fandriana ity mpivady ity dia tsy manana olana amin'ny maha-izy azy ireo. Hanana fotoana akaiky eo amin'ny fihetseham-po izy ireo. Saingy, hanana ny anjarany ara-pananahana izy ireo ho an'ny fahafinaretana ara-batana ihany koa.
Serasera Sagittarius sy Sagittarius
Ny mpivady Sagittarius sy Sagittarius dia manana fahaiza-manao miavaka amin'ny fifandraisana. Ny fisokafan'izy ireo sy ny fanehoana ny tenany dia manatsara ny fifanarahan'i Sagittarius sy Sagittarius. Izy ireo dia zavaboary ara-tsosialy izay miafara amin'ny fananana faribolana lehibe sakaiza. Saingy, hain'izy ireo koa ny mifampiresaka. Misokatra sy maneho hevitra izy ireo. Ny olona Sagittarius dia tsy mitazona ny fihetseham-pony. Hilaza na inona na inona eo an-dohany izy ireo. Eto no misy olana.
Matetika i Sagittarius dia miteny nefa tsy mametraka eritreritra betsaka amin'ny mety ho fiantraikany amin'ny olona iray hafa amin'ny toe-pihetseham-po. Tsy mba handratra olona amin'ny fikasana akory izy ireo. Kosa, tsy fantatr'izy ireo fa mety handratra olona izy ireo satria tsy mieritreritra ny zava-drehetra. Raha tokony handinika ny vokatry ny fihetsik'izy ireo dia milaza izay ao an-tsain'izy ireo. Tsy midika foana hoe Sagittarius midika hoe inona no lazain'izy ireo.
Eo anelanelan'ny olon-tiana Sagittarius roa, ny fitenenana zavatra amin'ny cuff dia mety hiteraka olana. Raha tsy miteraka ady hevitra eo noho eo izany dia zavatra iray lazain'i Sagittarius no mety hahatonga ny olon-tiany hanontany azy ireo. Izy io dia mety hiteraka tsy fahatokisan-tena na lolom-po. Rehefa manjaka ny fisalasalana dia mikorontana i Sagittarius. Tsy hiteny na dia iray aza izy ireo momba ireo fahatsapana naratra nahazo azy ireo. Halevin'izy ireo fotsiny ny fanaintainana ary hanohy. Saingy, ny faharatr'izy ireo dia hiseho amin'ny halaviran'ny hahatongavan'izy ireo.
Ny antony tsy itenenan'ny Sagittarius fihetseham-po maharary dia ny fandavany hangataka fanampiana amin'ny hafa. Io no fomba 'henjana' voajanahary an'i Sagittarius mandroaka. Tsy te ho hitan'izy ireo ho kivy na sahirana izy ireo. Matetika, tsy miraharaha ny fomba fahitan'izao tontolo izao azy ireo izy ireo. Saingy, miaraka amin'ny sehatry ny fahatsapana, rehefa mandratra izy ireo, dia aleon'izy ireo mitokana irery.
Fifandonana Sagittarius sy Sagitarius
Ny fahasamihafana kely kely ananan'ity pairing ity dia mety hisy fiantraikany amin'ny tanjaky ny fifanarahan'ny Sagittarius sy Sagittarius. Ny iray amin'ireo olana lehibe atrehin'ity mpivady mirehitra ity dia ny mety ho doro tanety. Samy mandeha foana ny toetran'ny Sagittarius. Miasa na mankafy ny tenany izy ireo, saingy misy fotoana fohy.
Na dia ao amin'ny efitrano fandriana aza, angovo avo lenta no takiana. Izany no izy, azo atao ny samy lany etona. Rehefa mitranga izany dia mety maharitra fotoana maharitra vao sitrana. Ny vanim-potoana maharitra fanarenana dia mety hahatsapa ho afa-po na mankaleo. Ny mankaleo dia tsy zavatra karakarain'ny toetra Sagittarius tsara! Hijery zavatra ivelan'ny fifandraisana izy ireo hitarika ny fahalianan'izy ireo indray.
Raha mihazakazaka mankany amin'ny fanambadiana ity duo ity amin'ny taona voalohany dia mety hiteraka olana izany. Olona Sagittarius roa no mila fotoana hiaina ny nofinofin'izy ireo. Raha tsy izany, hiafara amin'ny fahatsapana rojom-bolo sy voafandrika izy ireo fa tsy amin'ny fitiavana ao amin'ny fianakaviana sambatra. Ny ankizy amin'ny taona voalohan'ity pairing ity dia zavatra tokony hodinihin'ny mpivady Sagittarius ihany koa. Ny fandehanana eny rehetra eny sy ny ankizy dia tsy fomba fanamboarana fahasambarana.
Ny fitenenana ny sainao dia fananana lehibe rehefa takiana ny fanaovana ny marina. Saingy, misy tanjona ao ambadiky ny lainga fotsy. Ny fanafenana zavatra sasany dia afaka mamonjy ny tarehy sy misoroka ny fahatsapana maharary. Tahaka ny hoe mbola tsy naheno momba ny lainga fotsy ny olona Sagittarius. Izay rehetra eo an-tendron'ny lelany dia miraraka. Mety hanimba ny fifandraisana izany.
Sagittarius sy Sagittarius Polarity
Amin'ny astrolojia, ny famantarana rehetra dia mifanaraka amin'i Yin na Yang. Ireo hery ireo dia fitaomana mahery vaika na polarities. Vehivavy i Yin. Ny hery manohitra, Yang, dia lehilahy. Ny famaritana ny miralenta dia mamaritra ny hery fotsiny ary tsy misy ifandraisany amin'ny tena miralenta. Amin'ny lalao fitiavana Sagittarius sy Sagittarius, ireo famantarana roa ireo dia mifanaraka amin'i Yang.
Ny angovo Yang dia mahatonga ny personalite Sagittarius ho hery hiadivana! Mahatonga azy ireo hanjakazaka, hamafisina ary hifantohany amin'ny hetsika. Ny fiasan'ny angovo Sagittarius mandeha amin'ny herinaratra dia avy amin'ny fitaomana Yang miaraka amin'ny singa mitaona afo. Manana fiara mafy sy mifantoka izy ireo.
Saingy, ny angovo Yang dia mety hianjera amin'ny fandanjalanjana. Rehefa tsy mahay mandanjalanja i Yang, dia miho-poitra izy. Midika izany fa ny olona personalita Sagittarius dia mety ho lasa mahery setra, manjakazaka ary miakatra. Sarotra raha ny iray na ny antoko Sagittarius no mahatsapa tsy fifandanjana. Hifarana ny ady hevitra, amin'ny ady epic, ary ny fanaovana labiera amin'ny lolom-po.
Raha tokony hirehitra amin'ny fahatezerana dia tsy maintsy mamihina ny angovo Yin mpanohitra ity duo ity. Ny fanaovana izany dia hanampy amin'ny famahana ny fitaomana mahery. Ny angovo Yin dia afaka manampy an'i Sagittarius ho lasa mailaka kokoa, mora mandray ary misokatra kokoa. Hamela ity duo ity hifanaraka amin'ny filan'ny tsirairay. Izy io koa dia mahatonga azy ireo hangoraka sy hahatakatra bebe kokoa.
Aspect Sagittarius sy Sagittarius
Ny zodiaka rehetra famantarana amin'ny fanandroana dia eo amin'ny kodiarana selestialy. Ny elanelana misy eo amin'ny famantarana dia zoro. Ny zoro dia refesina ny elanelana misy famantarana. Ity halavirana ity dia miteraka lafiny iray. Ny lafiny eo anelanelan'ny mari-pamantarana iray dia ny degre zero na ny lafiny konjunkta. Amin'ny lafiny fitsangatsanganana, ny iray dia manombana ny fifandraisan'ny fifandraisana Sagittarius sy Sagittarius.
Ny teny hoe 'conjunction' dia avy amin'ny French Old fampifandraisana, midika hoe 'firaisana na fidirana.' Manondro ara-bakiteny ny famantarana Sagittarius sy ireo famantarana mizara toerana mitovy amin'ny lanitra izy io. Rehefa mifampitohy ety an-tany ny toetra roa Sagittarius dia toy ny kambana na raiki-pitia amin'ny lafiny iray amin'ny tenany izany!
Raha nianatra ny fanekena ny tenany sy ny fitiavany ny tenany toa azy izy mivady dia tsy hanana olana amin'ny fifankatiavana izy ireo. Ny fanekena ny tena dia mitarika amin'ny fanekena tanteraka ny fanahy mitovy amin'izany. Izy roa ireto dia manana zavatra itoviana. Raha manana olana amin'ny fanekena ny tenany izy ireo, dia zavatra iray tsy maintsy iasan'izy ireo amin'ny fifandraisana.
Ny olana tokana atrehin'ireo mpankafy Sagittarius roa hafa dia ny fanamavoana ny fahazarana mahazatra. Noho izy ireo mifankahalala tsara dia afaka mifankaleo haingana izy ireo. Mamono ny fifankatiavana eo amin'ny samy mpikaroka mandritra ny androm-piainana ny fahasosorana. Ny fanasitranana an'io dia ny famelana ny fizakan-tena, izay zavatra hafa tadiavin'ny olona Sagittarius!
Sagittarius sy singa Sagittarius
Ny famantarana ny zodiaka rehetra dia mifanaraka amin'ny singa iray: Tany, Afo, Rano, na rivotra. Ny singa dia mitazona ny toe-tsaina, toetra ary fihetsika. Ny mpiara-miombon'antoka Sagittarius dia eo ambany fitarihan'ny singa Fire. Ny fitaomana afo dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fifanarahan'ny Sagittarius sy Sagittarius.
Miaraka amin'ny afo mitaona ny lalao Sagittarius sy Sagittarius, izy roa ireo dia manana toetra mampirehitra. Fanahy fanahy roa no mifanentana, fa afaka mifandroritra. Raha mitandrina izy ireo ary manana fotoana tsy fiasana dia afaka mizara lelafo mirehitra hatrany izy ireo. Raha tsy izany dia mirehitra haingana, mafy ary manjavona haingana kokoa ny lelafin'ny fitiavana!
Ny afo dia ao ambadiky ny firaisana ara-nofo ataon'ity mpivady ity izay misy hafanana be eo anelanelan'ny lambam-pandriana. Tsara raha mitazona siny misy ranomandry eraky ny fandriana ireto mpivady ireto. Hilain'izy ireo izany hamoahana ny hetahetany mandritra ny fihaonan'izy ireo mandritra ny ora maro!
Ity afo mirehitra ivelan'ny efitrano fandriana ity dia afaka adika ho faniriana na toetra. Raha mandrehitra ny hetahetany ny afo, dia mety ho voatarika mafy toy izany izy ireo, asa-miasa izy ireo. Mety handrahona ny fifandraisana izany raha toa ny filan'ny nofo alohan'ny fitiavana. Rehefa mandrehitra ny fahatezeran'i Sagittarius ny afo dia tsy misy isalasalana fa ho lohan'ireto roalahy ireto. Hanana ady tsy hay hadinoina sy tsy azo avela izy ireo, izay manimba ny fiorenan'ny fifandraisana.
Fampifanarahana ny lehilahy Sagittarius sy ny vehivavy Sagittarius
Ny fifanentanana Sagittarius sy Sagittarius dia mihamatanjaka rehefa miara-miasa izy mivady. Tsy maintsy milefitra amin'ny sasany amin'ireo fahasamihafana misy eo aminy izy ireo ary mamihina ny toetrany tsara indrindra. Io ihany no fomba ahafahan'ny fitiavana miaina miaraka amina toetra roa mitovy.
Ny Sagittarius Man dia malala-tsaina amin'ny fahitana haingana. Ankafiziny ny mifalifaly nefa fantany koa ny maha-zava-dehibe ny asa. Mahita toetra mitovy amin'izany izy ao amin'ny Woman Sagittarius, ary ireo toetra ireo no hitany fa manintona. Samy mila vady manolo-tena ny roa tonta. Faharoa amin'ny fanoloran-tena ho zava-dehibe dia ny fitiavana andian-tantara ny andaniny roa!
Miaraka amin'ny fakana risika, ny lehilahy Sagittarius dia tsy misalasala. Tiany ny miloka ary miaina amin'ny toerana mampidi-doza. Miasa mafy izy nefa milalao bebe kokoa aza. Vehivavy Sagitarius dia mampidi-doza ihany koa. Tsy hanana olana amin'ny fihazonana azy izy satria tiany ny fientanam-po rehetra. Ny olana tokana hananan'ireo junkies adrenaline mitondra risika ireo dia ny manapa-kevitra hoe iza no misafidy ny fanararaotana mampientam-po manaraka!
Ny lehilahy Sagittarius dia hahita nirvana faly miaraka amin'ny Vehivavy Sagittarius. Samy tia fihaonana ara-nofo izy ireo ary andrana. Mbola tsara kokoa aza, ity duo ity dia manana tanjaka ara-batana hifaneraserana. Ny hany olana atrehin'ity Duo ity manoloana ny firaisana ara-nofo Olaimpika ananany dia ny fitarihana ny tenany hiala ny fandriany hiasa ny ampitso! Ny lalao fitiavana Sagittarius sy Sagittarius dia mila mitandrina fa tsy mihoa-pefy izy ireo. Mora loatra ny may!
Ny lehilahy Sagittarius dia manana peeves biby fiompy maromaro mila fantatry ny Vehivavy Sagittarius. Amin'ny fahalalana izay mahatezitra azy indrindra, dia azony atao ny misoroka ny fandrika mety hitranga eo amin'ny fiarahan'izy ireo. Amin'ny ankapobeny, ny lehilahy Sagittarius dia mora mifanaraka. Saingy, misy zavatra hanosika azy hivoaka ny varavarana.
Ny Sagittarius Woman dia mendri-pitokisana, ary zavatra tsara izy. Izay rehetra manolo-tena amin'ny lehilahy Sagittarius dia mila mahatoky. Mitaky ny tsy fivadihan'ny mpiara-miasa aminy izy. Ankoatr'izay, raha manome toky azy izy, dia mila mitazona ny voadiny. Ho an'ny Sagittarius Man, ny fampanantenan-tena dia tsy fitoviana amin'ny lainga. Raha tsy maintsy mandika toky izy na inona na inona antony, dia tsara kokoa izany. Tokony hanazava ny tenany amin'ny antony tsara izy hijerena ny fandikan-dalàna.
Ny Sagittarius Man dia olona iray izay tsy manana ny zava-misy marina foana. Tsy fantany fa tsy mahitsy ny zava-misy, fa tsy izy koa mba te hanaiky fa diso koa izy. Eto no mety mikapoka loha ny Lehilahy Sagittarius sy ny Vehivavy Sagittarius.
Raha miditra amin'ny tsy fitovian-kevitra momba izay manana ny marina momba ny zava-misy izy ireo dia hitaky ny heviny ny roa tonta. Na dia mahita ny lesoka amin'ny zava-misy aza ny iray amin'izy ireo dia hijanona ho tapa-kevitra amin'ny ady hevitra tany am-boalohany izy ireo. Ny fanekena tsy hifanaraka no hany vahaolana amin'ny vahaolana amin'ny toe-javatra toy izany.
Ny fifandraisana Sagittarius sy Sagittarius dia manana ny mampiavaka azy. Izy io koa dia misy lafy ratsy. Saingy, olona Sagittarius manana finiavana mafy sy mahery ary mirehitra roa no afaka mampandeha ny fitiavana. Ny fanoloran-tena maharitra dia eo am-piandohana raha toa ka manana fanekena lembenana izy roa tonta.
Ny olo-malaza Sagittarius dia mahita kisarisary voajanahary. Toy ny hoe manome aingam-panahy ho azy ireo ny aura's avelany hahafantatra an'i Sagittarius fa natao hiaraka izy ireo. Olona Sagittarius tia olona mahafinaritra roa no nanomboka hatramin'ny voalohany. Mahafinaritra azy ireo ny mifampiresaka ary mifampahery. Tsy ela talohan'ny nahitan'izy ireo dia hahita zavatra hafa momba ny samy hafa manentana azy ireo izy ireo!
Ny Vehivavy Sagittarius dia miaina mankafy araka izay azony atao amin'ny fiainana. Tsy olona mipetraka amin'ny fahaleovan-tena izy. Tiany ny hampiasa ny minitra tsirairay amin'ny fotoanany na hiasa mafy na hiasa mafy. Tsy misy eo anelanelany. Ny Sagittarius Man dia mitovy, ka manao vady ideal. Ho vitany ny manaraka ny filany fientanam-po. Ny Sagittarius Man dia miasa mafy koa.
Miaraka amin'ny firaisana, ny vehivavy Sagittarius dia tsy saro-kenatra amin'ny zavatra tadiaviny. Aloky ny volondavenona maizina dimampolo dia iray amin'ireo flick tiany indrindra. Nahazo mari-pahaizana master momba ny kink izy ary mahay mampiasa azy! Lehilahy Sagittarius dia faly tamin'ny malalany be mpitia! Nahazo ny lafiny kinky mitovy aminy ihany izy.
Mandritra ny alina lava sy lalao maro no miandry an'ity duo ity eo anelanelan'ny lamba. Tokony hampiasa vola amin'ny ambain mainty izy ireo mba hitazomana ny tsiambaratelo. Raha tsy izany, ny velaran-tany manokana any afovoan-tany dia hanavotra ireo mpifanila vodirindrina amin'ny fampisehoana mety tsy dia tian'izy ireo atao isaky ny alina!
Sagittarius sy Sagittarius mifanentana dia miavaka. Toa tsy misy lesoka io paika romantika io. Saingy, ny marina amin'izany dia ny fifandraisana rehetra dia misy sakana tsy azo handresena. Tsy misy hafa amin'izany amin'ny Sagittarius Woman sy Sagittarius Man. Noho izany, inona no tsy maintsy atahoran'ity mpivady be fitiavana ity?
Voalohany, mila mitandrina izy ireo amin'izay lazainy. Tsy izay lazain'izy ireo ihany, fa ny fomba ilazany azy. Raha toa ny lehilahy Sagitarius dia toa mitsaratsara na mitsikera, dia handratra ny fihetseham-pon'ilay Vehivavy Sagittarius izy. Raha manolotra 'torohevitra mahasoa' an'ny Sagittarius Man izy na dia am-pitiavana aza dia mety hieritreritra izy fa mitsara azy. Ny toetran'ny Sagittarius dia marefo ary mandray am-po izay lazain'ny mpiara-miasa. Ny mieritreritra alohan'ny hitenenana dia fampiharana tsy tapaka ilain'ity mpivady ity.
ity planeta ity dia akaiky indrindra ny masoandro
Ilay Sagittarius Vehivavy dia velona tafavoaka velona. Io no endrika asehony an'izao tontolo izao. Eo ambanin'ny tarehy mpiambina vehivavy rehetra dia misy bera teddy malefaka izay lalina sy mahery ary be fientanam-po. Mora saro-piaro izy, na dia tsy asehony aza izany. Maharary azy izany raha lehilahy Sagittarius no milalao vehivavy hafa na dia manao vazivazy fotsiny aza izy.
Miaraka amin'ny mpivady Sagittarius sy Sagittarius, ny fahaleovan-tena dia tombony lehibe. Samy mitombo ny roa tonta rehefa manam-potoana ho an'ny tenany. Ny fahaleovan-tenan'izy ireo dia mamela ny fifandraisana hiroborobo. Manampy amin'ny tsirairay amin'izy ireo izany. Na izany aza, mety ho lasa afa-po ny roa tonta. Manararaotra ny fahaleovan-tena izy ireo, manadino fa mila fotoana hifampizarana koa izy ireo. Rehefa mitranga izany dia mora loatra ny manasaraka ny toetra roa Sagittarius.
Ny fanantenana, ny fanaovana risika ary ny fitokisana no andrin'ny lalao fitiavana Sagittarius sy Sagittarius. Ity mpivady ity dia manana zavatra betsaka ho azy ireo hatrany am-piandohana. Mpinamana be sy maharitra izy ireo. Miaina mafy izy ireo, milalao mafy ary tia bebe kokoa aza. Ny fiezahana ny tsy fitoviana kely eo amin'izy ireo dia mihoatra ny mendrika ezaka. Izy io dia mety hiteraka fitiavana sy fahasambarana mandritra ny fiainana iray manontolo.
Manantena ny ambaratonga mitovy amin'ny fifaneraserana ve ianao amin'ny fifandraisanao manokana? Angamba ianao ao anaty pairing mifanentana izao, ary tianao ho fantatra ny fomba fanatsarana azy io. Azonao atao ny mampiasa ny zava-misy momba ny fifandraisan'ny astrolojia mba hianaranao bebe kokoa momba ilay olona tianao. Jereo hoe inona no itovizanao, ny tsy fitovizanao ary ny fomba hahatonga ny fiarahanareo hiasa na inona na inona! Avelao ny Astros Horoscope isan'andro hanoro anao ny lalana!
Tsindrio raha hianaranao rehetra Toetra sy toetra mampiavaka an'i Sagittarius !
dikany ara-panahy ny loko volomboasary
8 ny lalan'ny fiainako
iza amin'ireo planeta no mihemotra amin'izao fotoana izao
planeta inona no akaiky indrindra ny masoandro